Pokémon GO mutambo une njodzi ... maererano nehurumende yeChinese | IPhone nhau
Pokémon GO mutambo une njodzi ... maererano nehurumende yeChinese
Pablo Aparicio | | IPhone mitambo, Noticias
Pamwe panguva imwechete iyoyo Pokémon GO yakasvika kuApp Store nhau nezve mutambo wakatanga. Pakati penyaya idzi paive nezvimwe zvakaratidza kuti, kana vashandisi vasingaite chikamu chedu, kuvhurwa kwekupedzisira kweNintendo kunogona kuve nenjodzi nekuti, kana tikatarisa pachiratidziri kwete panzvimbo dzakatipoteredza, tinogona kuyambuka migwagwa tisina kutarisa kana kufamba uchienda kunaani Ziva kupi. Asi idzi hadzisi mhando dzenjodzi idzo China isingazorega mutambo uuye mudunhu mawo.
Kubva pakuonekwa kwayo, Pokémon mafeni mukati China ichafanirwa kugamuchira chokwadi chekuti havazokwanise kutamba kuPokémon GO nekuti Hurumende yayo inoti ndizvo Zvine ngozi kuitendera. Hurumende yeChinese iri kushanda kuti iongorore njodzi dzingangovapo dzekuchengetedza, asi zvinoita sekunge iro zita rakanakirwa nekubudirira zvakanyanya muzvitoro zvakasiyana zveapp hazvizosvika pamusika mukuru wemitambo ye smartphone.
China inoti HAPANA kune Pokémon GO yekuve "tyisidziro kune chengetedzo yeruzivo rwepasi"
Pokémon GO yaive yakabudirira kubva payakatangwa, kuwana zana remamirioni kurodha pasi mumwedzi uye $ 10.000.000 mazuva ese. Niantic inofanirwa kunge ichipuruzira maoko ayo achifungidzira kumhara muChina, asi Reuters dhaiza kuti hurumende yeChinese haina hurongwa hwekubvumidza zita iri.
Iyo State Administration yeVepanhau, Ruzhinji, Radio, Firimu uye Terevhizheni yenyika huru yeAsia iri kuongorora njodzi dzekubhejera na "yakakwira danho repamusoro rekuchengetedza nyika uye kuchengetedzeka kwehupenyu hwevanhu nezvinhu zvavo«. Kune rimwe divi, iyo China Association ye Audio-vhidhiyo uye Dhijitari Publishing inoti izvi njodzi zvinosanganisira «kutyisidzira kuchengetedzwa kweruzivo lwenzvimbo uye kutyisidzira kwekufambisa uye kuchengetedzeka kwevatengi".
Uye, ngatitaurei nazvo, tese takafunga chinhu chimwe chete kamwe, tichifunga kuti Pokémon GO inogona tumira ruzivo rwekugara pamusoro patiri uye, kana tikashandisa kubatwa kwePokémon neAR chiratidzo, Zvese zvinotikomberedza. Kunyangwe zvingatsamwise vateveri veChinese Pokémon, zviri kuitwa neChina hazvisi kubvumidza United States (Niantic) neJapan (Nintendo) kuwana ruzivo kubva kuChina kuburikidza nemutambo "usingakuvadzi".
Iwe unofungei nezve matanho akatorwa kusvika pari zvino nehurumende yeChinese? Iwe ungade here kuti hurumende yako inyorove kakawanda senge iyo yeChina kana iwe unofunga kuti uku ndiko kuzara-kuzere kwekudzivirira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO mutambo une njodzi ... maererano nehurumende yeChinese
Toni Lara Perez akadaro
Chii chandinofunga nezve chiyero chehurumende yeChina? Zvakanaka, chiyero chakajairika chehudzvanyiriri chinopfuudza rusununguko rwakanyanya uye kodzero dzevanhu dzekumhara, uye kuti dai China yanga isiri "fekitori yenyika" ingangove iri pasi pezvemari kubva kune vekunze nyika kana kana zvisiri, zvirinani iyo nzanga yaizove nayo kanenge padanho rakaenzana rekufunga seNorth Korea.
Ko kana ndichifarira kuti hurumende yangu inyorove pazvinhu izvi? Kwete, ndatenda. Zvinoreva kuti isu hatisi mune democracy uye, zvingangoita, chinyorwa ichi chingadai chisipo kana kuita saizvozvo muchimiro chekurumbidza kusabvumirwa kwemutambo uye uchitaura zvikonzero zvemumagaba izvo hurumende ingadai yakaita kuti iwe usvike icho chinangwa.
Pindura Toni Lara Pérez
Muna 2017, Apple ichapfuura trillion dhora chiratidzo mumari kubva kuIOS
Apple Campus 2: basa racho rava kusvika kumagumo